Uqoqosho lweMidlalo yaSimahla yeHlabathi | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 21, 2012 NgoLwesibini, Februwari 21, 2012 UAdam Omncinci
Iinkampani zijonge ekuphuhliseni iinkqubo zokwenza isicelo kunye nokusetyenziswa kweselfowuni okuncoma inkonzo yabo; Nangona kunjalo, ii -apps zokuzonwabisa zasimahla zihlala zingaqwalaselwa njengenye indlela efanelekileyo.
Imodeli yeshishini le-freemium ithatha indawo-eqikelelwa kwi-65% yengeniso eveliswe ziiapps ezili-100 eziphezulu kwiVenkile yeApple, kunye ne-72% eqikelelweyo yengeniso yeVenkile yeVenkile evela kwimidlalo yeselfowuni. Ukuthengwa komdlalo ngaphakathi komdlalo njengobomi obongezelelekileyo, amandla akhethekileyo, iimpahla ezibonakalayo kunye nokwenza ngokwakho kuqhuba ingeniso. Ukusuka YokUph
Ngaba loluphi uhlobo lomdlalo olunokuphuhliswa yinkampani yakho oluya konwaba kwaye lubandakanye abasebenzisi beselfowuni, ngelixa likuvumela ukuba unxibelelane nabo ngokufanelekileyo malunga neemveliso okanye iinkonzo zakho?